Myanmar and S.Korea Aim for More Economic Collaboration | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar and S.Korea Aim for More Economic Collaboration
Myanmar and S.Korea Aim for More Economic Collaboration
Dr. Than Myint, Union Minister of the Ministry of Commerce, at the first meeting of the Joint Commission for Trade and Industrial Cooperation said that Myanmar will increase economic collaboration with South Korea and he believes it will help overcome the economic setbacks.
“We are grateful to South Korea’s support for the social and economic development of Myanmar. Through these meetings, I strongly believe that cooperation between Myanmar and Korea in the sectors like trade, investment, industry, and power will grow rapidly, and through cooperations, we will be able to overcome the economic downturn globally occurred due to the COVID-19,” he added.
The meeting, held asavideo conferencing, was led by Dr. Than Myint and Mr. Sung Yunmo, Minister of the Ministry of Trade, Industry and Energy, South Korea.
“Thanks to the reform process implemented by the Myanmar government, investments into the country has grown. I believe that Korea Desk, after launching, will support Korean businesses in Myanmar and help Myanmar products access to the global market. The bilateral trade will also grow by doing more cooperation in trade, investment, industry and power as well as other sectors,” Mr. Sung Yunmo said.
Korea has made investments in various sectors including the garment sector.
Covid-19ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး စီးပွားရေး ကျဆင်းနေချိန် တွင် မြန်မာ-ကိုရီးယားပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဖြင့့်စီးပွားရေး အကျပ်အတည်း များကို ကျော်လွှားသွားနိုင်မည်ဟု စီး/ကူးဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်က ပြောကြားလိုက်သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့က ကျင်းပသော ပထမအကြိမ် မြန်မာ-ကိုရီးယား ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲကော်မရှင် အစည်းအဝေး (1st Meeting of Joint Commission for Trade and Industrial Cooperation)တွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုရေး၊စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ အကူအညီပေးအပ် နေမှုများ အပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ယခုလို နှစ်နိုင်ငံအစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်းဖြင့် မြန်မာနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့အကြား စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စက်မှုနှင့် စွမ်းအင် ကဏ္ဍ တို့မှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှုများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လာမယ်လို့ အခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်။ Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး စီးပွားရေး ကျဆင်းလျက်ရှိရာ မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ယခုလို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမှတစ်ဆင့် စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းများကို ကျော်လွှားသွားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါတယ်”ဟု ဒေါက်တာသန်းမြင့်က ပြောသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးကို စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ညီလာခံ ခန်းမ၌ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်နှင့် ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ကြီး H.E. Mr. Sung Yunmo တို့က ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြသည်။
“မြန်မာ အစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်း စဉ်များကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုတိုးတက် လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Korea Desk ထူထောင်ပြီး နောက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကိုရီးယားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်မယ့် အပြင် မြန်မာ့ထုတ်ကုန်များ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်လည်း အထောက် အကူဖြစ်စေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စက်မှုနှင့် စွမ်းအင် ကဏ္ဍများတွင်သာမက အခြားကဏ္ဍများ၌ပါ ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားခြင်း ဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ အကြား ကုန်သွယ်မှုများ တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး H.E. Mr.Sung Yunmo က ဆိုသည်။
ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထည် ချုပ်လုပ်ငန်းများအပါအဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍများစွာ၌ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ယင်းအစည်းအဝေးမှ သိရသည်။
Previous articleScreen Time for Children During Homebased Learning – A View from Yangon American International School
Next articleGovt Extends Deadline for Taxes on Unassessed Income